Kaliya afar bedasha Crypto adeeca shuruudaha jaangooyaha ee South Korean - Blockchain News
dabayaaqadii January, waxaa noqday kuwa loo yaqaan oo ku saabsan mamnuucidda rasmi ah by masuuliyiinta South Korean ah qarsoodi xawaalad cryptocurrencies, kaas oo dhaqan galay on January 30. Iyadoo la tixraacayo shuruudaha Guddiga Adeegyada Maaliyadeed ee South Korea (FSC), lix baan ku ballan-qaaday in la dhiso kaabayaasha ah sameynta koontada magacyada dhabta ah. Si kastaba ha ahaatee, maadaama ay ka leexatay ka dib, bangiyada loogama baahna in ay bixiyaan adeegyo cusub oo macaamiisha ka mid ah is-weydaarsiga Cryptocurrency.
“abuurka ah ee xisaab cusub loo xilsaaray inay sarrifka lacagta ah waa go'aan ikhtiyaari ah oo bangiga,” rasmiga ah warshadaha bangiyada a sheegay edition ah South Korean ee Yonhap. Wuxu: “Banks in ay leeyihiin waajibaad sharci ah si looga hortago in lacagta la dhaqay la hubinayaa oo kaliya by nidaamka gudaha: xaqiijinta macaamiisha ka dhaafsiga crypto, xasiloonida nidaamka, ilaalinta macluumaadka user iyo waafaqsanaanta xeerarka dhabargoynta lacagta la dhaqay.”
Oo ka mid ah lix baan hore u soo sheegnay, saddex kaliya – Shinhan Bank, NongHyup Bank iyo Industrial Bank of Korea – siiyaan xisaabaha macaamiisha ee ku bedasha Crypto. Oo kaliya afar ka mid ah 25 weydaarsiga South Korean sarrifka lacagta bedelay xisaab qarsoodi xisaabaha magacyada dhabta ah. Sayidka, shuruudaha sharci dajinta cusub oo u dhigma Bithumb, Upbit, Coinone iyo Korbit.
Sida laga soo xigtay Asia Dhaqaalaha, Shinhan Bank, taas oo u adeegta Bithumb, sidoo kale go'aansaday inuu ku meel gaar ah ka horjoogsanaya in sarrifka ka yahay habka abuurista xisaab magacyada dhabta ah. Wakiilka of bangiga sharaxay in qiyaas waxaa lagu qabtay ee la xidhiidha xaqiiqada ah in “sarrifka waxaa la hubiyaa by booliska” in ay dhacdo dhac sanadkii hore.
weydaarsiga yaryar iyo kuwa meel dhexaadka ah in ay bixiyaan xisaabaadka shirkadaha, halkii ay kuwa dalwaddii, nidaaminaya shuruudaha kale. Sida laga soo xigtay daabacaadan Yonhap ah, waqti xaadirkaan, isticmaalka xisaabaadka shirkadaha loo ogol yahay in is-weydaarsiga ayaa si buuxda u taageeri karaan waajibaadkooda si looga hortago in lacagta la dhaqay, iyo sidoo kale si loo xaqiijiyo aqoonsiga ee macaamiisha. Intaa waxaa dheer, waxay la hoos gelin doonaa si “jeegaga dhamaystiran by bangiyada iyo maamulka dhaqaalaha.” Si kastaba ha ahaatee, weydaarsiga badan ma hesho xaqiijinta xisaab cusub oo u sheegay suxufiyiinta Yonhap in ay laasho lahaa xawaalad haddii xaaladda wax ka beddeli mayso. Sida laga soo xigtay Blockchain Association Korean ah, ku saabsan 787,600 macaamiisha isticmaala adeegyada is dhaafsi sida, hantida, kuwaas oo haatan ku jira jirey.
Post Previous:Coinbase bilaabmaa imtixaanka kama dambaysta ah ee Segwit
Post Next:oo dhan macdan qodayaasha ma noolaan doonaa Seeraar yareynta kharashka
Laga yaabaa 11, 2018 at 6:41 AM